သောကြာနေ့, ဒီဇင်ဘာလ 10, 2010 တနင်္လာနေ့, အောက်တိုဘာလ 3, 2011 Matt Chandler
ငါကဝန်ခံ: ငါစကားလုံးအခွံမာသီး။ ဘာသာစကားကိုကြိုက်တယ် အကယ်၍ ကျွန်ုပ်အနေနဲ့ "zeitgeist" ဆိုတဲ့စကားလုံးထက်ပိုပြီးငါပျော်မွေ့တာတစ်ခုကဝါကျတစ်ခုမှာအဲဒါကိုသုံးဖို့ရတယ်။
ထို့ကြောင့်ငါနှစ်စဉ်ရောက်ရှိလာခြင်းကိုစောင့်မျှော်ကြောင်းအလွန်မျှော်လင့်နှင့်အတူဖြစ်ပါတယ် Google Zeitgeist။ ငါကအများကြီးပြောသောကြောင့်, ဒါပေမယ့်လည်းဒါဟာပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကနေရှာဖွေရေး၏ပြည်နယ်သို့ကြည့်ရှုရန်အလွန်စိတ်ကူးနှစ်စဉ်အားရစရာကြောင့်ကြောင့်ဖြစ်သည်။
ငါ GZ ၏နည်းလမ်းများတွင်ကျောင်းမတက်သောသူများအတွက်ကျွန်ုပ်သည်၎င်းအားချစ်ခင်စွာရည်ညွှန်းသည့်အတိုင်း၎င်းသည် Wu-Tang Clan အဖွဲ့ဝင်မဟုတ်ပါ ( အဆိုပါ Genius ခေါ် GZA) ။ GZ သည်ဂူဂဲလ်၏အဆိုအရ“ ကျွန်ုပ်တို့နှစ်ပေါင်းများစွာခံစားခဲ့ရသည့်ပျော်ရွှင်မှု၊ ဝမ်းနည်းခြင်းနှင့်သိလိုစိတ်ကို (ဖမ်းယူခြင်း) ၏မြင့်မားစွာဖော်ပြထားသော်လည်းတိကျမှန်ကန်သောရည်မှန်းချက်ဖြင့်“ ယခုနှစ်အတွင်းလူကြိုက်အများဆုံးနှင့်အမြန်ဆုံးမြင့်တက်လာသည့်မေးမြန်းမှုများ” ဖြစ်သည်။
Zeitgeist သည် ၀ က်ဘ်ပေါ်မှကမ္ဘာကြီးကိုရှာဖွေနေသည့်အရာများကိုထူးခြားစွာကြည့်ရှုနိုင်သည်။ အဘယ်အရာကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့စုပေါင်းအကျိုးစီးပွား piqued? အသစ်အဆန်းကဘာလဲ? အဘယ်သို့သောကျော်ကြားမှုဟာသူတို့ရဲ့ gourds မှထွက်သွား? မည်သူ့ရင်ခွင်သည်လူအများရှေ့တွင်အံ့အားသင့်စရာဖြစ်စေခဲ့သနည်း။
သင်သည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိရှာဖွေမှုလမ်းကြောင်းများကိုဆန်းစစ်ရန် (သို့) အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှအကြောင်းအရာခေါင်းစဉ်များကိုကြည့်ရှုရန်ကမ္ဘာ၏ကွဲပြားခြားနားသောအစိတ်အပိုင်းများကိုပင်သင်ကျဉ်းမြောင်းနိုင်သည်။ ရှာဖွေခြင်းလမ်းကြောင်းများမြင့်တက်ခြင်းနှင့်ကျဆင်းခြင်းကိုနာမည်ကြီးများ၊ အားကစား၊ သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာစသည့်ကဏ္inများစွာတွင်လေ့လာနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်၏အကြိုက်ဆုံးအမျိုးအစားမှာ Quirky ဖြစ်ပြီးထိုနေရာတွင်ကျွန်ုပ်လေ့လာခဲ့သည် အလျင်အမြန်မြင့်တက်ဟယ်လိုဝင်းဝတ်စုံတောင်းဆိုမှုကို ခဲ့ စနူကီ။ အဲဒီနောက်မှာငါဟာဂူးဂဲလ်ကိုသုံးပြီး Snooki ဘယ်သူလဲဆိုတာရှာခဲ့တယ်
voyeurism: ဤဥပမာသည် GZ ၏ကျွန်ုပ်အကြိုက်ဆုံးလက္ခဏာကိုဖော်ပြသည်။ ငါ snoop ဖြစ်ခြင်း၏အနက်ကိုသိချင်တယ်, ကမ္ဘာကြီးကကမ္ဘာကြီးကိုကြည့်ရှုခြင်း၏စိတ်ကျေနပ်မှုကိုရှာဖွေနေသည်။ ၎င်းသည်လူကြိုက်များသောယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာကိုးကားချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်အားရှာဖွေရန်အခွင့်အလမ်းပေးသည်။ အများစုမှာကျွန်ုပ်လုံးဝသတိမထားမိဘဲကျန်နေခဲ့သည်။
အင်တာနက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်နည်းပညာနယ်ပယ်များအကြောင်းကိုဖတ်ရှုခြင်း၏ပဲ့တင်သံအခန်းထဲသို့ ၀ င်ရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။ ကုန်သွယ်ရေးမှစျေးကွက်သမားတစ်ယောက်အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်အနည်းဆုံးကျယ်ပြန့်သောယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာခေတ်ရေစီးကြောင်းနှင့်ပတ်သက်သောဗဟုသုတရှိသောဗဟုသုတကိုထိန်းသိမ်းရန်ကျွန်ုပ်အတွက်အရေးကြီးသည်။ Snooki ဆိုတာဘယ်သူတွေလဲဆိုတာအခုငါသိတဲ့အတွက်ရုတ်တရက်“ Jersey Shore” ကိုကိုးကွယ်သူဖြစ်လာမယ့်အတွက် Google Zeitgeist ကအဲဒီလိုလုပ်ဖို့နည်းလမ်းတွေကိုထောက်ပံ့ပေးတယ်။
Tags: ကင်မရာ +ရှာတွေ့နိုင်သည်ကို formatsခေါင်းကြီးပိုင်းတွင်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအဖြစ်အပျက်slider ကိုသတင်းရင်းမြစ်
သင်၏ WordPress ဘလော့တွင် B2B Vis ည့်သည်များကိုသတ်မှတ်ခြင်း